Tababare Jurgen Klopp oo ka hadlay mustaqbalkiisa naadiga Liverpool – Gool FM
Ahmed Nur January 17, 2022
(Liverpool) 17 Jan 2022. Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa shaki geliyay mustaqbalkiisa leylinta naadiga Reds isagoo saxaafadda la hadlay kaddib guushii 3-0 ahayd ee ay kooxdiisu ka gaartay naadiga Brentford ciyaartii Premier League ee shalay.
“Waan ku faraxsanahay, markii aan 2015 imaanayay halkaan sawirku waa ka duwanaa haatan, waqtiyo xasaasi ah ayaana jiray tan iyo markaas, wax walba oo yar oo aad sameysid waa wax qiimo leh inta ay la egyihiin iyo dareenka dartood” ayuu yiri Klopp oo kulankiisii 350-aad Liverpool leyliyay shalay.
“Waa sida qoys oo kale, inaan sidaan sii ahaanno ayaan rabnaa, ma ahaaneysid mid had iyo jeer nasiib leh, anigu waan nasiib badanahaya, aad ayaan uga fognahay inaan buuga xirno, sidaas darteed, qoristiisu weynu sii wadi doonna, mana garaneyno goorta uu dhammaan doono” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Ereyadan ayaa rajo weyn gelinaya taageerayaasha kooxda lixda jeer hanatay tartanka horyaallada Yurub, hase ahaatee, waxaa uu carrabka ku dhuftay inuusan ogeyn xilliga uu soo gabagabeyn doono waayaha xukunkiisa Anfield.
Ma kula tahay in qarashka saxda ah ee ku baxayo saxiixa Erling Haaland uu gaarayo 350 milyan oo euro?... (Ka bogo jidadka ay qarashaadka intaas la ug ku baxayaan)